taageero - Changzhou Hucheng Imp.and Exp. Co., Ltd.
Si adeegga looga dhigo mid qiimo badan
U samee xulasho sax ah warshadahaaga dalabka si ay u buuxiyaan shuruudahaaga. Iibkayaga iyo teknolojiyadeennu waxay ku farxi doonaan inay kaala taliyaan doorashada waxyaabaha kaydka alxamida ah.
Waxaan ku jirnaa khadka tooska ah 24 saacadood waxaadna nagala soo xariiri kartaa emayl, taleefoon, WhatsApp, WeChat, Skype, iwm. Haddii aad rabto fiidiyow internet-ka ah inaad soo booqato warshadda oo aad faahfaahin ka weydisato, fadlan horay u sii ogeysii si iibkayaga uu si fiican ugu labisto si uu u bixiyo. adiga aragti qurux badan / qurux badan.
Tijaabooyin bilaash ah ayaa la bixiyay
Waxaan rajeyneynaa inaad ka heli karto alaabadayada oo aad aragto tayadeeda.
Waxaan haynaa toban qalab oo jilicsan oo xawaare ah 18 mitir sekiba, 26 qalab sawiro fiican oo xawaare ah 14-16 mitir ilbiriqsi, 56 qalab kiimiko ah 8 mitir seken, 33 qalabka qalabka wax lagu xiro, seddex mashiin oo baakadaha lagu diro, iyo daaweynta bulaacadaha hal meel. Si loo hubiyo in si fudud loo gaarsiin karo.
Waxaan qabanaa tijaabada TODDHIGKA HADDA YARKA, TAYADA AWOODAHA AWOODAHA, BAADHITAANKA XAQIIQADA, ARC STRIKING TEST, tijaabada xawaaraha, waxaanna dammaanad ka qaadaynaa in dhalidda ay ka sarreyso 95%
Dukaan kasta oo alaabadayadu ka mid tahay waxay leeyihiin lambar duug ah oo gaar ah. Haddii ay jiraan wax dhibaato tayo leh, waxaan raadin karnaa dhibaatooyinka ka dhaca meel kasta oo ka mid ah hannaanka waxsoosaarka ee alaabta ceyriinka ah.
Ma ku kalsoon tahay adeeggayaga?
Aan ku bilowno salaanta maanta.
HUCHENG Alxanka Qalabka, alxanka mig wir ...
mig silig alxanka, mig silig, ER70S-6, s ...
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010-2019: Dhammaan xuquuq dhowran. Featured Products - Sitemap - Mobile Site
ka daadanayo Cored Wire Quudiyaha , ka daadanayo Cored Arc Alxanka Wire , Alxanka la isticmaalo ,